Archive du 14-mars-2022
Ny fomba amam-panao efa hita hatramin’izay ny maha ratsy azy na tsy nilana fikarohana lalina aza ankehitriny no mihatra eto amin’ity nosintsika ity raha politika no resahana.
Fanovana governemanta Misavoritaka ambony ambany ny mpitondra
Mangotraka ny adivarotra politika, ary misavoritaka ny etamazaoro politikan’ny mpitondra ao anatin’ny raharaha fanovana ny governemanta.
Ambodin’Isotry sy Ampasampito Tratra ambodiomby ireo mpangalatra finday
Tao anatin'ny andro vitsy izay dia saika nahatratra mpangarom-paosy sy mpanendaka finday hatrany ny Polisim-pirenena.
Kaominin’Ambavahaditokana 80 190 000 ariary no atokan’ny fanjakana ho azy
Hatrany amin’ny 80.190.000 ariary no tetibola atokan’ny fanjakana Malagasy ho an’ny kaominin’Ambavahaditokana ho an’ity taona 2022 ity, raha ny voarakitra ao anatin’ny tetibolam-panjakana 2022,
Mpanolontsain’ny tananan’Antananarivo « Kiafinafina be ny momba ny SMGD sy ilay 11 miliara Ar »
Namaly ny fanehoan-kevitry ny ben’ny tananan’Antananarivo mikasika ny raharaha CNaPS sy CUA tetsy Bel’air ny sabotsy teo ireo mpanolontsain’ny tananan’Antananarivo. Raha mijery ny ampamoaka momba ny raharaha CNaPS
SEG Jeneraly Gellé Serge Niantso ireo minisitra mibodo toerana hiala
Mpikamban’ny governemanta isan’ny naneho hevitra voalohany mikasika ny fanovana ny governemanta ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena (SEG) Jeneraly Gellé Serge.
Voasazy i Madagasikara Herintaona tsy mahazo manao tsipy kanetibe iraisam-pirenena
Nosazian'ny federasionina iraisam-pirenena taranja tsipy kanetibe tsy handray anjara amin'ny fifaninanana ho an'ny tsipy kanetibe manerantany mandritra ny herintaona i Madagasikara.
Depiote Brunelle « Tsy hiresaka politika aho, Ikongo aloha no maika izao »
Tsy manana eritreretina ankoatr’izay mahazo an’Ikongo aho aloha hatreto, hoy ny depiote voafidy tamin’ny lokon’ny fitondrana mijoro ankehitriny tany amin’ity distrika ity, Brunelle Razafitsiandraofa,
Raiamandreny ara-drazana Haneho ny tena herin’ny fanahy ao aminy ireo Manankasy
Haneho ny tena herin’ny fanahy hananan’ny Manankasy ireo Raiamandreny ara-drazana eto amintsika.
Mandrangombato II Notifirin’ireo jiolahy izy mianaka avy niantsena
Nisehoana fanafihana mitam-piadiana teny Mandrangombato II ny sabotsy hariva teo tokony ho tamin'ny 7ora sy fahefany.
16 volana eo sisa ananan-dRajoelina Aiza ho aiza ny famitana ny Tana-Masoandro ?
Ny 10 febroary no nilazan’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana eo anivon’ny Fiadidian’ny Repoblika,
Hofana Parking, fitakiam-bola be Sao dia mba tsy rariny, hoy mponin’i Mahamasina
Tsy manaiky ny fanesorana aminy toeram-piantsonan’ny fiaran’izy ireo mponin'i Tsimialonjafy, Atsimon'i Mahamasina, Ambanin'Ampahamarinana, ary Ankadilalana mampiasa ny Parking eo Mahamasina sy ny manodidina,
Rugby Malagasy “Miha tsara hatrany isan-taona ny taninketsa”
Mivoatra miha tsara foana isan-taona ny tontolon’ireo katitakely taninketsan’ny Rugby Malagasy miofana eo anivon’ny EREV na “Ecole de rugby, école de la vie” eto Madagasikara,
Tranga tsy fahita firy Lasan’ny mpanakan-dalana ny lisi-pifidianana
Tsy mifidy asiana ny olon-dratsy fa izay heveriny fa ahitana misy vola sy harena azony petahana dia lasibatra avokoa.
Hetra tranon’Antananarivo Misy fifanarahana tsy mazava
Farany teo izahay, hoy ireo mpanolontsain’ny tananan’Antananarivo, raha nanontany ny tale jeneralin’ny orinasa SMDG hoe iza io tale io dia ny valinteny azonay dia hoe “hanontanio an’ny ben’ny tanana”.
Kianja manara-penitra Vola nariam-potsiny ny ao Moramanga ?
Taorian’ny naha dibo-drano azy tamin’ny andron’ny rivodoza, mitohy ny maha lasa toeram-panariam-pako ny kianja manara-penitra ao Moramanga.